Home News Xildhibaano katirsan Golaha Shacabka oo la kulmay Dhaliyarada ku nool Magaalada Muqdisho
Xildhibaano katirsan Golaha Shacabka oo la kulmay Dhaliyarada ku nool Magaalada Muqdisho
Kulanka oo ahaa mid casho ah ayaa xildhibaabada iyo dhalinyarada waxa ay ka wada hadleen doorka dhalinyarada ee xoojinta dowladnimada Soomaaliya.
Xilldhibaanada ayaa warbixin ka dhageystay dhalinyarada, sidoo kale waxay iska xog wareysteen sida loogu faa’iideysan karo fursadaha u banaan dhalinyarada Soonaaliyeed.
“In xildhibaanada dhalinyarada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya soo hor fariistaan dhalinyarada ay metelaan waa farxad iyo guul lagu faano, waana soo dhaweyneynaa”.
ayay tiri Muna Axlaa oo ka mid ahayd dhalinyaradii kulanka ka qeyb gashay.
Xildhibaanada dhalinyarada ee Golaha Shacabka ayaa balan qaaday iney ka warheynaya xaalada dhalinyarada Soomaaliyeed, kana shaqeynayaan sidii dhalinyarada loo siin lahaa fursado hogaamin iyo kuwa shaqo abuur.
Previous articleMaxkamada Ciidamada Jubbaland oo maanta xukun dil ah fulisay
Next articleSoomaali lagu dilay Dalka Koonfur Afrika
Cidamada Kenya ee Joga Somaliya oo La Ogaaday Khasaraha Iyo Lacagaha...
Faarax Macalin oo Runta u sheegay Kheeyre”Waad ku fashilmi mooshinka aad...